Renaissance Actraiser – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Renaissance Actraiser – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Actraiser na-ejikọta omume ikpo okwu 2D (Ọrụ Ndị Ọrụ) ya na ịme anwansị ime obodo (Njikwa Ọchịchị) n'ọgụ ikpeazụ n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ!
N'igosi ụda ụda nke zigara egwu egwu na ụwa egwuregwu mgbe ewepụtara ya mbụ, Nke kpara Yuzo Koshiro dere – ugbu a remaster!
Nyere ụmụ mmadụ aka ito eto site n'ịkpọ egwu dị ka Onye-nwe Ìhè na mmụọ ozi ha na-eguzosi ike n'ihe n'ụwa nke ihe ọjọọ juru.
– Eserese 2D edegharịrị na-egosi egwuregwu ahụ na HD mara mma
– 15 egwu egwu ohuru, yana hazigharịrị egwu izizi site n'aka onye edemede Actraiser Yuzo Koshiro!
– Akụkọ ọhụrụ, ịgbasawanye omume na egwuregwu njikwa alaeze, usoro ihe omume ndị ọzọ, ala ọhụrụ niile, na ndị isi ọhụrụ dị ike karị!
– Nchekwa onwe yana ọkwa isi ike
Ọrụ Ndị Ọrụ: Tụgharịa ọkụ dị ike nke ọma, ice, na anwansi ndị ọzọ na usoro ihe omume 2D ndị a. Ụmụ mmadụ na-alọghachi iji nwetaghachi ógbè ahụ mgbe i meriri usoro ndị a, na-enye gị ohere ịmalite ịzụlite obodo gị.
Agbakwunyela anwansi ọhụrụ nke na-adịghị na egwuregwu mbụ yana ikike ịgbapụ. Ndị na-egwu egwuregwu nwekwara ike iji mmegharị elu na mgbada wakpoo maka ahụmịhe mmemme siri ike karị. Ị ga-achọ aghụghọ ọhụụ ọ bụla na ụlọ agha gị iji merie ndị isi siri ike na njedebe nke usoro mmemme ọhụrụ.
Njikwa Ọchịchị: Nyere ụmụ mmadụ aka ime nke ọma site n'ịzụlite ebe obibi gị na inye nduzi. Jiri ike ọrụ ebube gị kpọọ àmụmà ma kpalite ala ọma jijiji iji wepụ ihe mgbochi dịka osisi na nkume nkume ndị na-egbochi uto nke ndị ị họọrọ.. Gwuo dị ka mmụọ ozi nke Onye-nwe Ìhè ma jiri nnukwu ụta na akụ gị chụghachite ajọ anụ ọhịa ndị na-erigbu ndị gị..
Chebe ebe obibi gị pụọ na mwakpo ndị iro n'ọgụ dị adị ozugbo. Ndokwa nke mgbidi gị na oge ọrụ ebube gị bụ isi ihe iji nweta mmeri na ntinye aka ndị a.
Nweta akụkọ ọhụrụ banyere mgba ụmụ mmadụ na-agba iji merie mmejọ ha na ọdịda ha ka ha na-amụta ịhụ ibe ha n'anya na ọnụ na-esiwanye ike.. N'ozuzu, ọnọdụ ọhụrụ ndị a ruru ihe karịrị okpukpu abụọ akụkọ dị na mbụ. Nyochaa nnukwu mpaghara ọhụrụ ma nwee ọ enjoyụ na-ewu ebe obibi gị ogologo oge karịa ka ọ dịbu!
Onye na-ede ihe nkiri mbụ, Yuzo Koshiro, emezigharịala egwu izizi niile akara ngosi wee gbakwunye ya 15 egwu ohuru. Ndị na-egwu egwu nwere ike ige egwu mbụ ma ọ bụ gbanwee gaa na ụdị ahazigharịrị mgbe ha na-egwu egwuregwu ahụ. Ike gwụrụ gị ichebe na ịzụlite ndị obodo gị? Mgbe ahụ dị nnọọ nọdụ ala, Zuo ike, ma kporie ndụ egwu.
*Ngwa bụ ụdị egwuregwu zuru oke. Ị nwere ike mezue egwuregwu site na mmalite ruo n'isi na-enweghị nnọọ ịzụrụ egwuregwu.
Ngwa ndị na-akwado gam akporo 6.0+
*akwadoghị ụfọdụ ngwaọrụ.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Actraiser, CheatsHack, Renaissance
← Olympus: Idle Legends – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Egwuregwu JungleGem : Ndị aghụghọ PvP Match3&Mbanye anataghị ikike →
Solitaire Tripeaks Meover – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ohaneze Island: Gbawara okooko osisi ma wuo Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Egwuregwu Squid 3D 2022 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
POKOPOKO The Match 3 Ndị aghụghọ egwuregwu mgbagwoju anya&Mbanye anataghị ikike
Ndị uwe ojii 3D – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Anụ ọhịa & Mgbagwoju anya: edemede – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Agwaetiti ọhịa : Ndị aghụghọ egwuregwu izu ike&Mbanye anataghị ikike